Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Mandrara ny biby fanampiana ara-pientanam-po ny Air Canada
Airlines • Airport • Aviation • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fanapahan-kevitry ny Air Canada dia avy amin'ny fanapahan-kevitry ny Departemantan'ny fitaterana amerikana fa ny ESA dia tsy raisina ho biby mpanompo ary noho izany dia tsy voatery hanaiky azy ireo eny amin'ny seranam-piaramanidina monina any Etazonia.
Tsy avela amin'ny sidina Air Canada intsony ny biby mpanohana ny fihetsem-po.
Ireo mpitsabo aretin-tsaina dia manameloka ny fandraràn'ny ESA an'ny Air Canada.
Milaza ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka fa raha manana kilema ara-batana na ara-pahasalamana ianao dia afaka mahazo biby fanampiana, fa raha manana kilema ara-tsaina ianao dia tsy afaka.
Ity herinandro ity, Air Madagascar nanapa-kevitra ny handrara ny biby fanampiana ara-pientanam-po avy ao amin'ny tranobenany. Izany dia nitranga taorian'ny fanapahan-kevitry ny departemantan'ny fitaterana amerikana fa ny ESA dia tsy raisina ho biby mpanompo ary noho izany dia tsy voatery hanaiky azy ireo eny amin'ny seranam-piaramanidina monina any Etazonia.
Amin'izao fotoana izao, “Air MadagascarNy fitsipiky ny lalàna vaovao dia mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny fitaterana olona manana fahasembanana araka ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana any Canada, izay mihatra amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy ireo sampana fitaterana hafa. ”
Na izany aza, ny lalàna momba ny zon'olombelona sy ny fidirana amin'ny zon'olombelona any Ontario (izay tsy mihatra amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka any Canada) dia manaiky ny biby maro karazana ho "biby mpanompo."
Ny lalàna momba ny raharaham-pitsarana avy amin'ny tribonaly momba ny zon'olombelona ao Ontario dia manaiky fa ny "biby fiompiana" dia misy biby izay tsy nofanina na voamarin'ny fikambanana kilemaina ekena sy manampy ny olona manana fahasembanana ara-tsaina (jereo Allarie miady amin'i Ruble, 2010 HRTO 61 (CanLII) ).
Ny mpitsabo aretin-tsaina ary ny mpitsabo mpanampy biby lehibe indrindra eran-tany Prairie Conlon, LPC, NCC & talen'ny klinika ao CertaPet, dia nanameloka ny fandraràn'ny fiaramanidina ESA:
“Fantatsika fa ny biby mpanompo sy ny biby manohana ny fihetsem-po dia samy hafa be ary samy hafa ny tanjon'izy ireo. Fa ahoana no ahafahan'izy ireo milaza fa ny olona manana fahasembanana ara-batana, na sembana ara-tsaina sasany toy ny PTSD dia afaka manana alika mpanompo rehefa mila azy ireo ara-dalàna izy ireo, saingy olona iray izay voan'ny klinika manana aretina ara-tsaina ary manana ara-dalàna mila azy ireo tsy afaka manana ny biby miaraka aminy intsony? Fanavakavahana ny boky izany. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra kokoa dia milaza ireo zotram-pitaterana an'habakabaka fa raha manana fahasembanana ara-batana na ara-pahasalamana ianao dia afaka mahazo biby fanampiana, fa raha manana kilema ara-tsaina ianao dia tsy afaka. ”